Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo noqotay dalka 2aad ee ugu faqrisan caalamka
Itobiya oo noqotay dalka 2aad ee ugu faqrisan caalamka
Posted by ONA Admin	/ April 17, 2014
Shabakadda The African Economist ayaa soo qortay warbixintii ugu dambaysay ee Qaramada Midoobay ay ka soo diyaarisay saboolnimada caalamka iyadoo cinwaan uga dhitay in 10ka dal ee caalamka ugu faqrisan ay noqdeen dalalka Afrika. Shabakadda oo warbixinta sii wada ayaa qortay in Itobiya oo loo haystay inay tahay dalka ugu koboc badan xagga dhaqaalaheeda oo sheegata inuu si xawli ah ku socdo (a fast growing economy) ayaa noqotay dalka labaad ee ugu faqrisan markii baadhitaanka loo yaqaano MPI (Multidimensional Poverty Index) lagu sameeyay dalalka caalamka. Nidaamkan ayaa ah mid caalami ah oo siyaaba kala duwan u taxliiliya xaalada dhaqaale iyo nolsha dadweynaha.
Waxay shabakadda Dhaqaalyahanka Afrika ay soo qoraan ay su’aal saartay sheegashadii Xukuumadda Meles ee odhanaysay Dhaqaalaha Itobiya si Labaale ah (Double Digit) ayuu kobcayaa, taasoo bay yidhaahdeen ay Haya’adda Lacagta ee IMF ay soo xigan jireen. Dalalka ugu faqrisan ee qaramada Midoobay ay soo qoreen ayaa sidan u kala hooseeya;
Waxaa halkaa kaaga muuqanaya inay Somaliya ka horumarsan tahay Itobiya markii la saaray qiimayntan ku dhisan cilmiga oo dadweynaha noloshooda si dhab ah u fiirisa. Waxaa lagu tilmaamaa nidaamkan MPI inuu la mid yahay Weynaysada wax lagu fiiriyo waana mid xaaladda Saboolnimada si dhab ah u baadhaysa taasoon ahayn oo kali ah dakhliga dalka soo gala oo laga yaabo inuu inyar gacanta ugu jiro sida Itobiya. Wuxuu nidaamkan baadhayaa xaaladda ay ku noolyihiin dadweynaha kuwa ugu saboolsan iyo xaaladda guud ee dadweynaha xag waxbarasho, caafimaad iyo dakhliga.
Warbixintan cilmiga ku dhisan
Halkan ka akhri..